Teboka vavaka ho an'ny fifaliana | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Teboka vavaka ho an'ny fifaliana
Teboka vavaka ho an'ny fifaliana
Androany isika dia hiatrika teboka am-pifaliana amin'ny fifaliana. Mba hahatakarana ny dikan'ny fifaliana dia hijery fahasambarana aloha isika.
Famaritana ny fahasambarana:
Fahatsapana fahasambarana na hafaliana tafahoatra, indrindra mifandraika amin'ny fahazoana na fiandrasana zavatra tsara. Ny fahasambarana dia fihetseham-po izay iainana fahatsapana iray manomboka amin'ny fahafaham-po sy fahafaham-po hatramin'ny fifaliana sy fahafinaretana lehibe.
Andao hijery fifaliana
Ny fifaliana dia fahasambarana miorim-paka lalina tarihin'ny Fanahy Masina. Avy amin'ny Tompo izany. Tsy mahagaga raha milaza ny Baiboly fa 'ny fifaliana avy amin'ny Tompo no heriko'. Araka ny tontolon'ny anglisy, ny fahasambarana dia faritana ho fahatsapana na fihetsem-po, fa ao amin'ny fanjakana ny fifaliana dia mihoatra ny fahatsapana fotsiny fa fomba fiaina iray.
Raha toa ny fahatsapana ho irery ny fifaliana dia afaka manapa-kevitra ny ho faly isika amin'izao fotoana izao ary halahelo amin'ny fotoana manaraka. Mazava ho azy fa tsia, amin'ny maha mpino antsika dia tsy tokony hiainantsika ny fiainantsika tahaka izany.
Ny fomba fiainam-panjakan'ny fanjakana dia manilika ny an'ny an'izao tontolo izao, araka ny fitsipiky ny fanjakana tokony hiravoravoanao amin'ny fanamby atrehanao, na dia ho dondrona ho an'izao tontolo izao aza izany, haingana dia haingana izy ireo hiantso anao anarana mahita anao mifaly eo imason'ny fitsapana fa tsy ianao ho malahelo sy tsy misy fanantenana.
Ny mpino dia tokony hiasa amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitana (2 Kor 5; 7) izay manazava tsara ny antony tokony hifaliantsika na dia miatrika lalana aza. Ny fiasana amin'ny finoana dia midika fa manana antoka isika fa eo an-tsambo miaraka amin'i Jesosy hampitony ny tafio-drivotra (Marka 4: 35-41). (Rom 8:28)
Amin'ny ankapobeny ankehitriny, maro be amintsika no mandiso ny fahasambarana noho ny fifaliana sy ny mifamadika amin'izany. Raha mbola azo ampifamadihana izy ireo dia misy fahasamihafana misy eo amin'izy ireo.
Ny sasany amin'izany dia nohazavaina etsy ambany.
Ny fahasambarana dia miorina amin'ny fisehoan-javatra na fisehoan-javatra fa ny fifaliana tsy
Miovaova ny fahasambarana. Misy zavatra mahafaly ny olona iray ohatra: nividy finday vaovao ny vadinao / ny vadinao, nahazo fifanarahana ianao, nandalo fanadinana vatsim-pianarana, nahazo fiara fotsiny ianao, efa hanatrika fety fampakaram-bady na hanome anarana sns .. Ny hafaliana rehetra izay miaraka amin'ity dia vokatry ny zava-nitranga, / mitranga fa ny fifaliana dia ao anatiny ary tsy mifototra amin'ny hetsika.
Miala ny fahasambarana manoloana ny fahoriana. Jereo Fitomaniana 3:17 '”Tsy manana fiadanam-po ny fanahiko; Hadinoko ny atao hoe fahasambarana ”
Mandritra ny fotoana kelikely ny fahasambarana, maharitra mandrakizay ny fifaliana
Ny fahasambarana dia mifototra amin'ny fisehoan-javatra / fisehoan-javatra / fisehoan-javatra fa mihelina izy io, ary araka ny fanjakana dia tsy maharitra ny zavatra maharitra Rehefa gaga ny olona iray amin'ny fanomezana, fiara, vola sns, ny fahasambarana dia mandritra ny fotoana kelikely, roa na telo herinandro eo ho eo avy eo aorian'izay dia mihena na very tanteraka ny fifaliana
Maharitra ny fifaliana, maharitra mandrakizay ny fifaliana. Ary tianay ho fantatrareo, ry rahalahy, ny fahasoavan'Andriamanitra nomena tamin'ny fiangonana any Makedonia; fa tamin'ny fizahan-toetra fatratra dia nijaly, ny haben'ny fifaliany sy ny fahantrany dia tafahoatra tamin'ny fahalalahan-tànany. (2 Korintiana 8: 1-2)
Anisan'ny vokatry ny fanahy ny fifaliana (Gal 5: 22-23)
Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanam-po, fahari-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, ​​fahamarinana, fahalemem-panahy, fifehezan-tena. Tsy misy lalàna manohitra izany.
Misy ny fifaliana satria iray amin'ny vokatry ny fanahy mety hananan'ny mpino. Ny votoatin'ny fifaliana amin'ny fiainan'ny olona iray dia tsy azo hamafisina.
Manome fahasambarana ny olona, ​​Andriamanitra manome fifaliana
Milaza ny Baiboly fa manome fiadanam-po sy fifaliana ho antsika Andriamanitra. Tsy afaka manome fifaliana sy fifaliana betsaka ny olombelona, ​​Andriamanitra irery no mahavita. Ny Fanahy Masina no manome fifaliana ary ao Aminy no ahitana fifaliana mandrakizay. Hira iray milaza hoe 'Manana fifaliana toy ny ony aho, fifaliana toy ny ony, fifaliana toy ny ony ao amin'ny fanahiko'.
Ny hafaliana dia nanapaka ny fanahinao sy ny fanahinao ary ny vatanao. Ny fifaliana avy amin'ny Tompo no heriko (Neh 8:10) Ny fahasamihafana maro hafa dia misy fifaliana ao anatiny, ivelany ny fahasambarana.
Efa ela ny fifaliana, fohy ny fifaliana.
Ray misaotra anao aho Tompoko noho ity fampisehoana fifaliana ity, hisandratra amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
Mihoatra noho ity fampirantiana ity dia ampianaro ahy ny dikan'ny fifaliana amin'ny alalàn'i Jesosy.
Tsapa ny foko amin'ny hafalianao amin'ny anaran'i Jesosy.
Ampio aho hanana an'i Joy ho iray amin'ireo vokatry ny fanahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Ataovy mandre fifaliana sy fifaliana amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ny fifaliana dia miorim-paka ao amin'Andriamanitra, ampio aho raiko hahita anao, fa raha vao hitako ianao dia mahita fifaliana koa aho.
Jakôba 1: 2-3 2, heveriko ho fifaliana madio, ry rahalahiko, raha miatrika fitsapana maro karazana ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia miteraka faharetana. Ampian'i Dada ho falifaly aho na eo aza ny fitsapana sy fahoriana.
Omeo ahy ny fahasoavana hanana fahatokisana anao amin'ny zava-tsarotra hoy ny Baiboly na dia ao afovoan'ny afo aza dia hiaraka amintsika izy ..
Tompoko ô, avereno amiko ny fifaliana amin'ny famonjena ahy ary havaozy ato amiko ny fanahinao.
Prob 10:28, 'Ny fanantenan'ny marina dia fifaliana; fa ny fanantenan'ny ratsy fanahy ho foana'.
Avelan'i Dada ho fifaliana amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra ametrahako ny tanako.
Rom 15: 13 Andriamanitra Andriamanitry ny fanantenana anie hameno anao amin'ny fifaliana sy ny fiadanam-po amin'ny fahatokisanao azy, mba hananan'ny fanantenana ny herin'ny Fanahy Masina.
Ray mameno ahy fifaliana sy fiadanam-po mba hananako fanantenana amin'ny anaran'i Jesosy.
Ampio ny fifaliako ho feno sy be dia be.
Isaia 12: 6 Mihobia, mihobia, ry mponina any Ziona; fa lehibe eo aminao ny Iray Masin'ny Isiraely.
Hira fifaliana tsy hitsahatra amin'ny vavako amin'ny anaran'i Jesosy.
Izaia 35:10 Ary izay navotan'i Jehovah dia hiverina; Hiditra ao Ziona amin'ny fihobiana izy; Fifaliana mandrakizay no hosatrohiny. Fifaliana sy hafaliana no hahatratra azy ireo, ary ny alahelo sy ny fisentoana dia handositra ”
Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy ity anjarako ity
Misaotra anao Jesosy noho ny valiny natao tamin'ny vavaka.
Amin'ny anaran'i Jesosy mahafaly no ivavahako. Amena
Ny vavaka dia manondro fifaliana
Previous lahatsoratraTeboka vavaka ho an'ny herin'ny Fanahy Masina
Next lahatsoratraTeboka vavaka mba handeha amin'ny fitiavana
50 Fampaherezana ireo andian-Baiboly